Mbido EGO AFRICAN FOOTBALL Axel Tuanzebe Nwa akwukwo akuko nke oma
Anyị Axel Tuanzebe Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, Ndị nne na nna, Ezinụlọ, Enyi nwanyị / Nwunye ka ọ bụrụ, Ndụ, Net Worth na Ndụ Nke Onwe.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, anyị na-ewetara gị akụkọ ndụ zuru oke nke Axel Tuanzebe- site n'oge ọ bụ nwata ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Lee nchịkọta nke akụkọ ndụ ya dịka ọ na-agwa ọmarịcha akụkọ ya.
Ee, anyị enweghị ike ịgọnahụ eziokwu ahụ bụ na Axel Tuanzebe gosipụtara onwe ya dị ka onye na-agbachitere agbachitere na Champions League egwuregwu megide PSG na Ọktoba 2020.
N'ezie, anyị na-ele anya ịhụ arụmọrụ ka mma site n'aka ya n'ọdịnihu. N'agbanyeghị nkwanye ugwu ahụ, ọtụtụ ndị egwuregwu bọọlụ nwere obere mmụta gbasara akụkọ ndụ ya, nke bụ ihe na-atọ ụtọ. N’agwaghị ọtụtụ ihe, ka anyị bido.
Axel Tuanzebe Nwatakiri Akuko:
Malite na, Axel Tuanzebe a mụrụ na 14th ụbọchị nke ọnwa 1997 na nne na nna ya na Bunia, DR Congo. Ọ bụ otu n'ime ụmụ atọ amụrụ site na njikọ dị n'etiti nna ya na nne ya.
Mgbe a mụsịrị ya, nwa okoro ahụ na ezinụlọ ya nọrọ na DR Congo naanị afọ anọ tupu ha akwaga UK.
N'oge ahụ, obere Tuanzebe enwetaghị oge iji mara omenala obodo ya, nke agha Congo na mbụ na nke abụọ bibiri.
Agbanyeghị, nzụlite ya na United Kingdom rụpụtara ezigbo nsonaazụ ka ọ na - eburu mmasị na football. N'ezie, ọ maara nke ọma na ya site n'oge mbụ ọ banyere n'ime egwuregwu ahụ.
Axel Tuanzebe Ezigbo Ezinụlọ:
Onye Congo na-eto eto tolitere n'ezinụlọ bara ọgaranya nke nwere ike ị nweta mkpa ya. Ka a sịkwa ihe mere nna ya na mama ya ji nwee ike ịkwado njem ha site na Africa gaa Europe.
Site na mmalite nke Tuanzebe, nne na nna ya na-akwadokarị nrọ ya na ọchịchọ ya. N'ihi ya, nhọrọ ọ na-amasị ịbanye na football emeghị ka ọjụjụ ọ bụla dị n'ụlọ ya.
Axel Tuanzebe Ezinụlọ:
N'agbanyeghị agbanyeghị ebe ọ ga-esi nọrọ n'ụlọ, onye nchekwa ahụ agaghị echefu mgbọrọgwụ ya. N'ikwu eziokwu, agba akpụkpọ ya bụ ihe akaebe nke agbụrụ nna nna ya n'Africa.
Ọ bụghịzị akụkọ na Tuanzebe si na Bunia, isi obodo Ituri Province na DR Congo. Ka osi di, obodo ya edeputala otutu ihe ojoo n’oge gara aga.
Un Bunia bụ ebe kachasị ebe a na-eme ọtụtụ ọgụ na ọgụ n'oge Agha nke Abụọ nke Congo, nke malitere na 1998.
Axel Tuanzebe Mmụta na Ọrụ Nlekọta
Mgbe ezinụlọ ya rutere UK, ha gbanwere ngwa ngwa maka ibi ndụ nke mba ahụ. N'egbughị oge, nne na nna Axel debara aha ya n'ụlọ akwụkwọ St Cuthbert's RC High School na Rochdale.
Mgbe ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ, Tuanzebe sonyere ụdị egwuregwu niile. N'ihi egwuregwu egwuregwu ya mara mma, a họpụtara ya onye isi nke otu ụlọ akwụkwọ bọọlụ nke afọ 7.
Gaghị ekweta ya! ọ duru ndị otu ya gaa na njedebe nke Cup nke Schoolslọ Akwụkwọ nke Mba na-eme na 2009 na Stamford Bridge.
Axel Tuanzebe Ndụ Ndụ Mmalite:
Idebanye aha na ụlọ akwụkwọ anaghị egbochi ndị Congo na-eto eto ịbanye na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ.
Maa amụma? Tuanzebe sonyeere Manchester United Academy na 8. N'ezie, ọ maara na ọ dị ya mkpa ịrụ ọrụ dị mma iji nweta ọmarịcha ụlọ ọrụ ahụ.
Nke nta nke nta, nwatakịrị ahụ mere ka ọganihu football ya na Academy. N’afọ 2014, ọ bụụrụ ndị otu ntorobịa Manchester United ka ha merie iko Milk.
Mgbe e mesịrị, ọ meriri Jimmy Murphy Young Player of the Year na May 2015.
Axel Tuanzebe Bio - Roadzọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Ndị Congo mechara gafere n'etiti ndị ntorobịa United ka ọ na-egosi nnukwu egwuregwu bọọlụ.
N'ihi ya, o mere ọkachamara mbụ ya maka ụlọ ọrụ Bekee na 29th ụbọchị nke Jenụwarị 2017 na mmeri 4-0 FA Cup megide Wigan Athletic.
You maara? A kwalitere Axel Tuanzebe ka ọ bụrụ ndị isi nke United United ihe dị ka ọnwa anọ tupu Marcus Rashford na 2016.
Na Jenụwarị 2018, e zigara Axel Tuanzebe na mbinye ego iji wuchaa oge ndị ọzọ na Aston Villa. Otú ọ dị, ọ kwadoro nnukwu mmerụ nke na-ejedebe ọrụ ya maka Villa.
N'ihi ya, ọ mere naanị ihu ise maka Aston Villa na njedebe nke oge 2017-18.
Axel Tuanzebe Biography - Akụkọ nke Successga nke Ọma:
Mgbe ọ laghachiri Man United na August 2018, e binyere ya ego na Aston Villa maka oge 2018-19. N'ihi ya, o nyeere Aston Villa aka inweta mmeri EFL, nke mere ka ha bulie Premier League na 2019.
N'oge na-adịghị anya, Tuanzebe laghachiri na Manchester United wee bịanye aka na ụlọ ọrụ afọ atọ na ụlọ ọrụ Bekee na July 2019. Kedu ihe ọzọ? Ọ na-egwuri a chebe onwe ọrụ na-anọghị nke Harry Maguire na United's 2020-21 na-emepe Champions League megide PSG.
N'ezie, ikike ya ịkwụsị Kylian Mbappe na Neymar emewo ka o guzosie ike dị ka onye na-agbachitere Manchester United. You maara?… Tuanzebe bụ nwata kachasị nta kemgbe Norman Whiteside bụrụ onye isi United n'oge mmeri EFL Cup. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Ọnye na-bụ Axel Tuanzebe Girlfriend?
Nwee obi ike na onye Congo na-egwu egwu dịka Japhet Tanganga na mmekọrịta mmekọrịta.
Agbanyeghị, ọ nweghị ike izochi eziokwu ahụ na ndị enyi nwanyị mara mma nke nwere mmasị na ya nke nwere ike ịbụ onye ọ ga-abụ enyi nwanyị ma ọ bụ ikekwe nwunye.
Iji gwa gị eziokwu, Tuanzebe etinyela uche ya na ọganiihu ọrụ ya n'oge edere Bio a. N'agbanyeghị nke ahụ, ịrụsi ọrụ ike ya na nnọgidesi ike ya maka ihe ịga nke ọma na-egosi na ọ na-arụ ọrụ iji nye nwunye ya na ụmụ ya ndụ ka mma.
Axel Tuanzebe Ndụ Nke Onwe:
Kedu ihe na-eme Axel Tuanzebe? Iji malite, onye ya bụ ngwakọta nke àgwà zodiac Scorpio. Ọ na-eche nnọọ echiche ma na-echebara ndị mmadụ echiche. Ọzọkwa, Tuanzebe gosipụtara oke mkpebi siri ike iji nwee ọganiihu n'ọrụ ya.
You maara?… Axel Tuanzebe nwere ezigbo mmasị n'ịgba ọkpọ na ịgba mgba. N'ezie, ọ nwere ike ịbụ na ọ ga-abanye n'ịkụ ọkpọ ma ọ bụrụ na ọ nwetaghị bọl. Hụ otu o si eme ọzụzụ onwe ya na obere vidiyo dị n'okpuru.
Axel Tuanzebe si ebi ndụ:
Ọ bụ ezie na Axel abụghị ọgaranya dịka Michy Batshuayi, o yiri ka ọ na-ebi ndụ okomoko. Ka a sịkwa ihe mere o ji zụta Mercedes Benz dị egwu (nke dị n'okpuru) mgbe ọ dị naanị afọ iri na asaa.
N'ezie, anyị enweghị ike ịgọnahụ eziokwu ahụ na ọ gaara azụta akụ ndị ọzọ dị oke ọnụ. Agbanyeghị, ọ naghị akwụ ụgwọ na mgbasa ozi mmekọrịta ya iji gosi ụlọ ya na ụgbọ ala ndị ọzọ mara mma n'oge edere Bio.
Mgbe ọ bịanyere aka na nkwekọrịta ya na Manchester United na 2019, Axel Tuanzebe's Net Worth mụbara ruo atụmatụ ego nke £ 2.2 nde. Agbanyeghị na ọ na-anata ụgwọ ọnwa kwa afọ nke £ 545,000, anyị ji n’aka na ego ọ na-enweta ga-akawanye mma ma ọ bụrụhaala na ọ nọ na klọb ahụ.
Axel Tuanzebe Ndụ Ezinụlọ:
Ekele dịrị ndị ezinụlọ ya, onye na-agbachitere ya ebiela ndụ na-enweghị owu ọmụma. N'ihi ya, anyị na-ewetara gị otu ozi zuru oke gbasara onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ ya.
Banyere Axel Tuanzebe Nna:
Nke mbu, nna Tuanzebe nwere ike o bughi onye nkuzi Judo dika ya Ndị Tieleman gịNna. Otú ọ dị, o gosipụtara mmasị dị ukwuu n’egwuregwu.
Ka a sịkwa ihe mere nna ya ji debanye aha ya na Man United agụmakwụkwọ iji nwekwuo ohere ịgba bọl. N'ikwu ya, anyị nwere ike ịchọpụta na nna ya bụ otu n'ime ntọala ọrụ ndụ ya.
Banyere Axel Tuanzebe Nne:
Ọrụ nne ya na-arụ n'oge a zụlitere ya agabigaghị ókè. Dika omenaala ndi nne nke Africa si zulite umu ha n'omume oma, otua ka nne Tuanzebe si mezuo oru ya. N'ihi ịhụnanya nne na nna ya nwere, Tuanzebe tolitere wee ghọọ nwa okorobịa nwere obiọma.
Banyere Axel Tuanzebe ụmụnne:
N'ụzọ na-akpali mmasị, onye ọkpụkpọ Congo nwere nwanne nwoke okenye nke aha ya bụ Dimitri, na nwanne nwanyị aha ya bụ Nadege. You maara? Nwanne nwanyị agbachitere nke dị n'okpuru ebe a nwere akara ejiji ya mgbe nwanne ya nwoke na-egwu bọl.
Sister Nwanne Tuanzebe bụ ezigbo agba egwu. Na-ekpe ikpe site na mmeghachi omume ya na otu vidiyo ya na mgbasa ozi mgbasa ozi, ọ dị ka onye na-agbachitere Congo nwekwara ike ịgba egwu. Lee ka o si agba egwu nke ọma na vidiyo dị n'okpuru.
Banyere ndị Axel Tuanzebe:
Kemgbe ọ ghọrọ onye ama ama, ọ nweghị ozi gbasara nna nna ya na nne nne ya. Ọzọkwa, anyị enweghị ike ịkọwapụta ma ọ bụrụ na ya na ndị ọzọ Congo na-ekerịta nkekọ ezinụlọ dị ka Tanguy Ndombele ebe obu na amaghi ndi ikwu ya.
Axel Tuanzebe Eziokwu Eziokwu:
Iji chịkọta Axel Tuanzebe Life Story, ndị a bụ ụfọdụ eziokwu a na-apụghị ịgụta ọnụ ga-enyere gị aka ịmatacha akụkọ ndụ ya.
Eziokwu nke 1: Ọ mebiri Guinness World Record:
Must ghaghi ịchọ ịmata etu Tuanzebe si nwee amamihe ebe ọ bụ na ọ mebiri Guinness World Record.
Eziokwu bụ, na July 2018, onye ọkpụkpọ Congo kpochapụrụ egwuregwu n'otu n'otu Agụụ Agụụ na-agụ Agụụ na nke kachasị dị mkpirikpi edere n'ụwa. Na-adọrọ mmasị, nri? Naanị mara na o nwere ọtụtụ ikike pụrụ iche.
Tebụl dị n'okpuru na-enye nyocha zuru ezu nke ego Tuanzebe nwetara na Manchester United n'oge edere Biography.
Kwa Afọ £ 545,590
kwa ọnwa £ 45,466
Kwa Izu £ 10,476
Kwa .bọchị £ 1,497
Kwa elekere £ 62
Kwa Nkeji £ 1.04
Kwa nke abụọ £ 0.02
Anyị emeela nyocha nke ọma maka ego Axel Tuanzebe na-enweta ka elekere na-akụ. Chọpụta n'onwe gị ego ole ọ kpatarala kemgbe ị bịara ebe a.
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Axel Tuanzebe's Bio, nke a bụ ihe o nwetara.
Eziokwu nke 3: Ọrụ mba:
Ewezuga mkpọsa football ya na klọb dị iche iche, ndị Kongo mekwara England ole na ole.
O juru ya anya? Kama igwu egwu maka DR Congo, Tuanzebe họọrọ isonye na otu egwuregwu England U-19, U-20 na U-21 na asọmpi mba dị iche iche. Ọfọn, DR Congo nwere ike ịkwụsị ọrụ ya n'ọdịnihu.
Site na nyocha profaịlụ ya nke egosiputara n'okpuru, igha achoputa na Tuanzebe nwere nchedo dika Aeron Wan Bisaka.
Ọ bụ ezie na o nwere ezigbo stats n'akụkụ ndị ọzọ nke football, ndị Congo ka mma karịa ijikwa bọl site n'azụ.
Dị ka Amara Diallo, ikike ya na-egosi na e nwere ọtụtụ ihe ọ ga-enye karịa ihe anyị na-ahụ ugbu a.
N'ikpeazụ, Tuanzebe amachaghị nke na-acha anụnụ anụnụ. Kama nke ahụ, ọ na-eji obere ohere iji gosipụta ihe ngosi dị ebube. Ka a sịkwa ihe mere o ji nwee ike ịmasị Ole Gunnar Solskjaer na mmeri United 2-1 meriri PSG na Ọktoba 2020.
Ọzọkwa, mgbalị nne na nna ya mere iji kwafee ha site na mpaghara agha tara ahụhụ kwesịrị ịja mma. O doro m anya na Tuanzebe na ụmụnne ya nwere obi ekele maka nna ha na nne ha maka ịzọpụta ha na nsogbu nke agha.
Daalụ maka ịgụ akwụkwọ Tuanzebe Biography na Untold Biography Eziokwu. Jiri nwayọ kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịchọta ihe ọ bụla na-adịghị ka ọ dị mma na edemede anyị. Ọzọkwa, kekọrịta echiche gị banyere ihe ị na-eche banyere ọdịnihu Tuanzebe na Man United na igbe igbe dị n'okpuru.
Aha n'uju: Axel Tuanzebe
Aha Nick: Zubee
Ụbọchị ọmụmụ: 14th November 1997
Ebe amụrụ onye: Bunia, DR Congo
Ụmụnne: Dimitri (nwanne nwoke okenye) na Nadege (nwanne nwanyị)
Ezigbo Net: £ 2.2 nde
Rygwọ ọnwa kwa afọ: £ 545,000
elu: 1.85m (6 ụkwụ 1 na)